किन गर्भवती भारती सिंहले अचानक आफ्नो मुम्बई स्थित घर छोडिन् ? « Etajakhabar
किन गर्भवती भारती सिंहले अचानक आफ्नो मुम्बई स्थित घर छोडिन् ?
एजेन्सी । भारतकी चर्चित अभिनेत्री भारती सिंहले अचानक आफ्नो मुम्बई स्थित घर छोडेकी छन् । उनी भर्खरै गर्भवती भएको खबर सार्वजनिक गरेकी थिइन् । विवाह गरेको धेरै वर्ष पछि गर्भवती भएकी भारती निकै खुसी थिइन् । तर हालै उनले आफ्नो घर छोडेको खबर भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् । भारतमा अचानक कोभिडको तेस्रो लहरले महामारीको रुप लिएपछि भारतीले आफुलाई सुरक्षित राख्न मुम्बई स्थित घर छोडेकी हुन् ।
मुम्बईमा अहिलेसम्म धेरै कलाकारहरु संक्रमित भइसकेका छन् । यो भाइरस गर्भवती महिलाका लागि झनै खतरनाक हुने भएकाले भारतीले आफुलाई सुरक्षित बनाएकी हुन् त्यसैले सावधानी अपनाउँदै हास्य कलाकार भारती सिंह आफ्ना श्रीमान् हर्ष लिम्बाचियासँग मुम्बई छोडेर आफ्नो फार्म हाउसमा गइन् ।
कोभिडको डरले भारती आफ्नो फार्म हाउसमा सरिन्
भारती सिंहले आफ्नो भर्खरको भ्लगमा यो जानकारी दिएकी छन्। भारतीले मुम्बईमा कोभिडको खतरालाई ध्यानमा राख्दै यो निर्णय लिएको बताइन् । हालको लागि, उनले आफ्नो फार्म हाउसबाट काम गर्नेछन् र भ्लग बनाउनेछन्। भारती सिंहले भ्लगमा आफ्नो फार्म हाउसको दृश्य पनि देखाएकी छिन् । त्यहाँ हर्ष र भारती एकअर्काको संगतमा मस्ती गरिरहेका छन् ।
भारती सिंहको गर्भावस्थाको चर्चा
भारती सिंहको गर्भावस्था यतिबेला चर्चामा छ । भारतीले इन्स्टामा बेबी बम्प देखाउने तस्बिर पनि सेयर गरेकी छिन् । रमाइलो कुरा के हो भने भारतीले फ्यान र कहिले पापाराजीलाई केटा हुन्छ कि केटी भनेर सोधिरहेकी हुन्छिन् । भारती सिंह गर्भावस्थाको आनन्द लिइरहेकी छिन् । यद्यपि उनीहरूले काम जारी राखेका छन्। भारतीले निर्धारित मितिसम्म काम गर्ने बताएकी छन् ।
भारतीको गर्भावस्थाको अवस्था कस्तो छ ?
गर्भवती भारतीको यो नाजुक समयमा उनका पति हर्षले निकै ख्याल राखेका छन् । भारती आफ्नो खानपानमा पूर्ण ख्याल गर्छिन् । भारती सिंह गर्भावस्थाको चरण कठिन हुने विश्वास गर्छिन्। अहिले उनको सम्पूर्ण ध्यान सन्तानमा केन्द्रित छ । भारती सिंहले एक अन्तर्वार्तामा आफ्नो मुड स्विङ्स भएको बताएकी थिइन् । कहिलेकाहीँ उनलाई धेरै रि स उठ्छ। कोभिडको समयमा भारतीलाई पनि आफ्नो बच्चाको चिन्ता छ ।
हेर्नुहोस् तपाइको आजको राशिफल : जेठ ४ गते, बुधबारको कस्तो छ तपाइको भाग्य ?
आजको पात्रो: आज २०७८ काे ४ जेठ, बुधबार । मे महिनाको १८ तारिक २०२२ ।
काठमाडौं महानगरपालिका: स्थापित र सिंहको मत परिणाम जोड्दा पनि बालेनकै धेरै
काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिका मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन साहले फराकिलो अग्रता कायम गरेका छन् ।
श्रीलंकाको आर्थिक संकटमा सबैभन्दा ठूलो योगदान कुव्यबस्था र बेथितीको छ : बौद्ध भिक्षु